वैदेशिक रोजगारी छोडेर स्वदशमै बाख्रापालन, आम्दानी पनि मनग्य | NepaliKisan.com
फलफूल तथा जडीबुटी
वैदेशिक रोजगारी छोडेर स्वदशमै बाख्रापालन, आम्दानी पनि मनग्य
पाँचथर । पाँचथर फिदिम–१ का केशव नेम्वाङले वैदेशिक रोजगारी छोडर अहिले स्वदेशमा नै व्यावसायिक बाख्रापालन शुरु गर्नुभएको छ ।
फिदिम नगरपालिका–१ मा फेदेन बाख्रापालन फार्म नै दर्ता गराएर उनले यो व्यवसाय शुरु गर्नुभएको हो । यसबाट उनले मासिक रु ४० हजार आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।
वैदेशिक रोजागारीका लागि उहाँ ०६६ सालमा बेल्जियम जानुभयो । त्यहाँ उहाँले झन्डै मासिक रु एक लाख ५० हजार कमाइ गर्नुहुन्थ्यो तर त्यहाँ कमाएको पैसाभन्दा थोरै भएपनि स्वदेशमा नै कमाउनुपर्छ भन्ने सोचाई लिएर चार वर्षपछि उहाँ घर फर्कनुभयो ।
घर फर्किएपछि उहाँले वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकम बाख्रापालन व्यवसायमा लगानी गर्नुभयो । अहिले उनको फार्ममा बयर जातका बाख्राबाख्री र त्यसका पाठापाठी छन् । पाठापाठी बिक्री गरेर उनले मासिक रु ४० हजार भन्दा बढी आम्दानी गर्दे आएको छ ।
फार्मबाट उत्पादन भएका पाठापाठी जिल्ला तथा झापा, इलाम, मोरङलगायत विभिन्न जिल्लाका सहकारी संस्था, व्यक्ति र समूदले लैजाने गरेका छन् । दुई महिनासम्म हुर्काएका पाठापाठीे बीउको रुपमा बिक्री हुने गरेका छन् । एउटा पाठा रु १५ हजारसम्म बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेम्वाङले भन्नुभयो, “अर्कोको देशमा गएर पसिना बगाएर बढी नै धन कमाए पनि बरु स्वदेशमै सिठोपिठो खाएर थोरै पैसा कमाएकोमा आनन्द र गौरव महसुस हुन्छ ।” अहिले पनि समाज र राज्यले कृषकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकेकोप्रति उहाँको गुनासो छ ।
व्यावसायिक रुपमै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फ लागेका युवालाई राज्यले समेत प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र हेर्ने दृष्टिकोण समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भनाइ नेम्वाङको छ । उहाँलाई अहिलेसम्म जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले रु दुई लाख अनुदान स्वरुप दिएको छ भने उत्कृष्ट कृषक भनेर रु १० हजार रकम र प्रमाणपत्र दिएको छ ।
यस्तै बाख्रापालन व्यवसायलाई अघि बढाउन विभिन्न प्राविधिक सहयोग पनि जिल्ला पशु विकास कार्यालयले गर्दै आएको छ । पशुपालक कृषक नेम्वाङले बाख्रापालन फार्मबाट प्राप्त आम्दानीले फिदिम बजारमै ससेस फ्याक्ट्रीसमेत सञ्चालन गर्नुभएको छ । रु आठ लाखको लागतमा उहाँले ससेस फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्नुभएको हो ।
गर्न सक्दा हुँदो रहेछ भन्ने गतिलो उदाहरण दिएको नेम्वाङको अहिले गाउँघरका साथीभाइले समेत प्रशंसा गर्दछन् । आउँदा दिनमा अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगबाट बाख्रापालन गर्दै जाने उहाँको लक्ष्य छ । –जीत बहादुर भण्डारी/rss
नेपालको कृषिजगत र नयाँ नयाँ प्रविधिको विकाससम्बन्धी समाचार र विचार सिधै फेसबुकमा प्राप्त गर्न हामीलाई लाइक र ट्वीटरमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ ।
खेतीयोग्य जमिन आवासीय रुपमा उपयोग December 5, 2017
अलैँची कृषक पाठशाला सञ्चालन December 5, 2017
सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित December 5, 2017
जाजरकोटमा धान उत्पादन घट्दो December 5, 2017
हिउँदे बाली सुक्न थालेपछि किसान चिन्तत December 5, 2017
© 2017 NepaliKisan.com. All Rights Reserved.
- Developed by db